Tovovavy mafana ho an'ny ankizy
Ny ririnina no fotoana mahatalanjona sy mahagaga amin'ity taona ity, amin'ny ampahany satria io vanim-potoana io no ankalazantsika ny andro fety mahagaga indrindra - ny Taombaovao . Amin'ny tononkalo ririnina, horonantsarimihetsika ary fehezam-boninkazo, voatokana hira. Ny fehezanteny faharoa faharoa, iray na iray hafa, dia misy fiantraikany amin'ity taona ity.
Ny reny be fitiavana dia faly mitantara na mamaky tantara an-tsoratra amin'ny zanany, ary raha ny marina, satria mamela hampivelatra ny fisainan'ny ankizy, dia mampianatra azy ireo hatsaram-panahy, fahamarinan-toetra, fanampiana iraisana. Ity ambany ity ny lisitry ny tantara fohy izay tsy azo tsinontsinoavina.
Lisitry ny tantaran'ny fifadian-kanina tsara indrindra ho an'ny ankizy
"Snow Maiden" (folklore). Ity dia tantara momba ny ankizivavy iray avy amin'ny ranomandry sy ny lanezy, izay niseho tamin'ny fomba mahagaga tao amin'ny lehilahy antitra iray tsy nanan-janaka sy ny vehivavy antitra iray ary nalemy noho ny hafanana na ny lohataona.
"Morozko" (folklore Rosiana). Ity fampatsiahivana ity dia mampianatra tanteraka ny ankizy ny fitondran-tena tsara sy ny hatsaram-panahy; Manana safidy maro izy io, saingy tsy maintsy voatery ho renikelin'ny zana-badiny, ny zanany vavy ary ny zana-bady.
"The Queen Queen" (G.K. Andersen). Ity dia mpanoratra mpanoratra sarotra, ny dikany dia sarotra ny manazava amin'ny zaza kely iray, satria na i Kaya aza dia tsy azo antsoina hoe mahery fo mahatsikaiky.
"Roapolo ambin'ny folon'ny volana" (folklore Slovaky amin'ny famoahana an'i S.Ya. Marshak) dia tantara tsara momba ny fanampiana ny namanao, ny fisakaizana ary ny hatsaram-panahy.
"Winter in Prostokvashino" (E. Uspensky) dia fomban-tsarimihetsika malaza sy malaza amin'ny tantara.
"Winter ririnina" (T. Wagner) - tantara momba an'i Moomins, ny iray amin'izy ireo dia tsy matory amin'ny ririnina araka ny tokony ho izy, saingy tafavoaka velona maro be, fihaonana mahagaga ary na dia andro fialan-tsasatra aza.
"Planeta ny taona vaovao" (J. Rodari) dia sangisangy momba ny planeta, izay maharitra 6 volana monja, ary ao amin'izy ireo dia tsy mihoatra ny 15 andro, ary isan'andro - Taombaovao.
"Chuk sy Huck" (AP Gaidar) - ny hetsika dia mitranga amin'ny ririnina. Ity tantara ity dia heverin'ny maro ho iray amin'ny tsara indrindra sy ny ankamaroan'ny ao an-toerana.
"Loko manga" (E. Permyak).
"Elka" (VG Suteev) - miorina amin'ity tantara ity, noforonina ny sarimihetsika malaza "The Snowman-Postman".
"Ahoana no nahitako ny taom-baovao" (V. Golyavkin).
"Jiro bengali " (N. Nosov).
"Tahaka ny atodiny, nisy jiro sy boriky iray niarahaba ny Taom-baovao" (S. Kozlov)
"Ny tantaran'ny Taom-baovao" (N. Losev)
"Taom-baovao" (NP Wagner)
"Nahoana ny lanezy no fotsy" (A. Lukyanov)
Fotoam-pialan-tsasatra amin'ny ririnina ho an'ny ankizy amin'ny fanangonana azy manokana
Raha te-hitondra ny zanakao amin'ny zava-mahasoa sy mahaliana ianao amin'ny iray amin'ireo takariva mangatsiaka, dia azonao atao ny maka sary an-tsoratra momba ny ririnina miaraka amin'ny zanakao lahy na zanakao. Izany dia azo antoka fa ho lasa fialam-boly tsy hay hadinoina sy mahavokatra, satria tia ankizy ny mamantatra, ary ny ankamaroany dia tia manao izany miaraka amin'ny ray aman-dreniny.
Tsy sarotra ny manoratra tantara momba ny ririnina. Ny tena zava-dehibe dia ny hanomezana fahalalahana marina ny fisainana. Tsy ilaina ny fanitsiana ny zaza, raha toa izy ka mandeha amin'ny lalan-dratsy. Avelao izy hahatsapa toy ny mpilaza tantara tena izy. Aza adino ny misaintsaina ny olana na ny dikan'ny nofinofinao, mampiseho ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy, manantitrantitra ny filàna ny fisafidianana ny lalana marina. Aza ampidirina ao anatin'ny herim-po mampihorohoro na tena ratsy - aoka ny zava-drehetra ho toy ny mamirapiratra sy tsara fanahy araka izay azo atao, ka aorian'izay sy ny zanakao dia te hamerina imbetsaka ny asanao ho an'ireo rehetra izay tsy miraharaha ny famoronana miaraka aminao.
Raha efa niomana ny fanangonan-tsirin'ny ririnina iray miaraka ianao, ireo sary avy amin'ny ankizy dia afaka manampy azy haneho izany, tsarovy izany, ampio izany. Angataho ny zanakao handoko ny fomba eritreretiny ny zavatra nosoratanao. Azonao atao ny manampy azy amin'izany, manorata na tsarovy ny fotoan-dehibe sasany ao amin'ny tantara. Azo antoka fa hahita fampisehoana mahatalanjona ny sangan'asinao ianao.
Ahoana ny fomba fitafy rongony amin'ny ririnina?
Hairstyle babies ho an'ny volo lava
Ny asa tanana amin'ny tanan'ny tanana
Ahoana ny fomba hanaovana sarety?
Miaraka amin'ny tananao
Ny famantaram-pahombiazana ataon'ny ankizy
ECO ICSI - mikasika ny fomba famokarana maoderina
Renee Zellweger dia nanolotra fampisehoana iray ho an'ny horonantsary "Baby Bridget Jones"
Ankizivavy manamboninahitra eny amin'ny lalantsara
Kitapo vita amin'ny plastika - kanto sy mora
Ahoana no hisafidianana ny wallpaper eo amin'ny lalantsara?
Lactostasis ao amin'ny renim-pianakaviana iray - fitsaboana sy fitsaboana
Nesorina ny efijery tamin'ny finday - inona no tokony hataoko?
Ilaina ve ny misotro an'i kefir amin'ny alina?
Nicolas Cage dia nanoroka tamin'ny daty iray niaraka tamin'ny olon-tsy fantatra
Fanatanjahantena ho an'ny fandevenana kibo
Akanjo lava - sary amin'ny modely sy sary tsara indrindra
Biographie an'ny Chuck Norris
Caterpillars amin'ny hazo paoma - ahoana no fomba hiadiana amin'ny bibikely?